HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo ka hadashey Xaalada Dhaawac ee Naby Keita iyo Waqtiga uu soo laabanayo
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay kalsooni ku qabto in Naby Keita uusan maqnaan doonin waqti aad u badan ka dib dhaawacii soo gaaray kulankii Axadii ay ka badiyeen Manchester United .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Guinea ayaa dhaawac kala kulamay Paul Pogba markaasi oo bareelo looga saaray ciyaarta qeybta danbe ee ciyaarta markaasi oo kaarka cas la siiyay.
Si kastaba ha ahaatee, The Athletic ayaa sheeganeysa in Keita uu door firfircoon ka ciyaaray dabaaldegga qolka labiska ka dib markii uu cagihiisa ku istaagay ciyaaryahankii hore ee RB Leipzig.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in Keita la filayo inuu kasoo kabsado nabaro soo gaaray taasoo meesha ka saartay cabsida laga qabo inuu mar kale ku sii jiro qolka caafimaadka ka dib xaalad canqowga ah ee xilli ciyaareedkii hore.
Goolkii Keita ee Old Trafford ayaa ahaa goolkiisii ​​afraad ee xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan waana goolkiisii ​​10-aad ee uu u dhaliyo Liverpool tan iyo markii uu yimid 2018.